Ndabere nke Igwefoto Ahụ-Ndị uwe ojii - OMG Solutions
Na-enweghị mbinye aka, ọdịnaya vidiyo enweghị ike ịkwado ya n'ụzọ ziri ezi ma ọ bụ nye ya na timestamps - nke nwere ike ịgbagha ihe akaebe. Ya mere, ndị mwakpo nwere ike ịgbanwe ihe onyonyo na-enweghị ike ịchọpụta ụdị nhazi a.
Igwefoto dijitalụ elebara anya na-enweghị ike ijide ya oge niile, yana eserese dijitalụ SLR nwere ike ijide n'ihu. Mana ọnụahịa nke igwefoto SLR dijitalụ bụ nke 5-6 nke nke igwefoto dijitalụ na-elekwasị anya. Ndụ nke ọkụ eletrik abụghị ogologo oge ọkụ ọkụ juputara na ọkụ, ọ dịkwa mkpa ka edochi ya ugboro ugboro (ọnwa 2-3), mana mmetụta njuju nke ọkụ eletrik kachasị mma.
Nzuzo 7021 1 Echiche Taa